ကိုရီယား ၀က်သားကင် | Wutyee Food House
ကိုရီယား စတိုင် ၀က်သားကင် လေးပါ။ ကိုရီယား ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ ဆလတ်ရွက်ထဲ ၀က်သားကင်၊ ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ ထည့်၊ ဆလတ်ရွက်လေးနဲ့ ထုပ်ပြီ စားတာ မြင်ပြီကတည်းက စားချင်နေတာ။ ခုမှ လုပ်စားဖြစ်တော့တယ်။ မိသားစု နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အတူလုပ်စားမယ်ဆိုရင် အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀က်သားကင်လေးပါ။ ချက်နည်းလေး ကြည့်ရအောင်
၀က်သား သုံးထပ်သား – ၃၀၀ ဂရမ် (ခပ်ပါးပါးလှီးပေးပါ)
ငရုတ်သီးစိမ်း တောင့်ရှည် – ၁ခု (ပါးပါးလှီးပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ – ၄ခု ( အရှည်ပါးပါးလှီးပါ)
သစ်တော်သီး – ၁လုံး (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ – ၄မွှာ (နှုတ်နှုတ်စဉ်းပါ)
ပျားရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
နှမ်းဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ကိုရီယား ငရုတ်သီးအနှစ် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၁။ နုပ်ရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (သစ်တော်သီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ)တို့ကို ကြိတ်စက်(blender) ဖြင့် ကြေညက်အောက် ကြိတ်ပေးပါ။
၂။ ပြီနောက် ဇလုံတစ်ခုထဲ (၀က်သား၊ ကြိတ်ထားသော သစ်တော်သီး၊ ငရုတ်သီးနှစ်၊ သကြား၊ ပျားရည်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ နှမ်းဆီ၊ ကြက်သွန်မြိတ်) တို့ကို ထည့်လိုက်ပါ။
၃။ နုပ်ရန်ပါဝင်ပစ္စည်း အားလုံးကို သမအောင် ရောနုယ်ပြီ ရေခဲသေတ္တာအောက်ထပ်တွင် အနည်းဆုံး နာရီဝက်ခန့် နုပ်ထားပေးပါ။
၄။ ပြီမှ မီးကင်ပြားကို ဆီအနည်းငယ်သုတ်ပြီ ၀က်သားများကို ကျက်သည်အထိ တဖက် ၅-၆ မိနစ်နှုန်းဖြင့် ကင်ပေးပါ။
၅။ ၀က်သားကင်များရပြီဆိုလျှင် ဆလတ်ရွက်ထဲ ၀က်သားကင်၊ ငရုတ်သီးတောင့်ရှည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ထည့်၍ ထုပ်ပြီ သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ…
taw lite tae wut yee lay
ဟီးဟီး ရှဲရှဲ မအိသက်။ 😀
sar chin tal pig yee yayy…
haa sar twar par my lovely twin lay yay 😀
Yeah it is, plz try it 🙂
၀တ်ရည် ရဲ့ချက်ပြုတ်နည်းတွေဖတ်ပြီးတနေ့တမျိုးချက်စားဖြစ်တယ်။ အရမ်းစားကောင်းလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ်ကြော်လးချက်စားချင်လို့ အဆင်ပြေရင် တင်ပေးပါအုံးနော်။
I will try to post this recipe soon. Thanks
Thanksalot.I love it.
sis fridge ca kae taeahtet ler , yoe yoe aye taeahtet co pyaw ter ler ?
Salai Awi Kim says:
ovenနဲ့ကင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ဒီဂရီနဲ့ဘယနှမိနစ်ထားရမလဲအစ်မရေ ဒီနေ့ချက်စားချင်လို့ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါအုံးနော်
၁၈၀ ဒီဂရီနဲ့ မိနစ် ၂၀လောက် ကင်ပေးပါ။
မရေ မနက်ဖန်ကျ Happy New Year လေ…မမရဲ့ ဝက်သားကင်လေးနဲ့ ကဲလိုက်မယ်နော်..D..D
haa.. Happy New Year sis
ညီမ ၀တ်ရည်ရေ …မနေ့က ညီမ တင်ထားတဲ့နည်းအတိုင်း ၀က်သားကင်ပလိုက်တယ် … အိမ်ကလူတွေတောင် ချီးကျူးလို့ ကောင်းတယ်တဲ့… ကျေးဇူးပါ ညီမရေ …နောက်လည်း တခြားဟင်းတွေ ထပ်ချက်စားကြည့်ဦးမယ် … နှစ်သစ်မှာ ချစ်သောမိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ…
Thet o s says:
အမရေ သစ်တော်သီးဘာလို့ ထည့်လဲ ဆိုတာလေးပြောပြပါအုန်းနော်……. သူမပါ၇င်ကော..၇လားလို့ …
သစ်တော်သီးပါတော့ ကင်တဲ့အခါ ခြောက်ကပ်ကပ်မဖြစ်ပဲ၊ စိုစိုလေးနဲ့ ပိုစားလို့ကောင်းလို့ပါ။ သစ်တော်သီးကတော့ ကိုရီးယားအကင်တွေမှာ အဓိကမို့ ထည့်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်
မမ ရေ အသားကင်တာတော်တော်ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆားမပါလို့ တစ်ခုခုလိုသလိုဖြစ်နေတယ်။စားလို့ တော့ ရပါတယ်။ဆားပါရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။အကြံလေးပေးပါနော်။ကိုရီးရားတွေကဆားမပါပဲစားတယ်ထင်တယ်။
အရသာနယ်ထားတဲ့ အသားစိမ်းတွေကို သိမ်းထားချင်ပါတယ်။ ရေခဲသေတာ အောက်ထပ်မှာ သိမ်းလို့ရပါသလား။ ဘယ်နှရက်လောက်အထားခံပါသလဲ။ ရေခဲသေတာ အောက်ထပ်နဲ့အပေါ်ထပ်ဘယ်မှာသိမ်းရင်ပိုအထားခံပါသလဲ
၁ရက်လောက် သိမ်းထားလို့ရပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာအောက်ထပ်မှာပါ
တိန်!ကိုရီးယားငရုပ်သီးနှစ်ကဒီလိုစားကတာကို ခုမှသိတော့တယ်ဟိုနေ့က၀ယ်ပြီးဒီတိုင်းတို့စားကြည့်တာမကောင်းလို့လွင့်ပြစ်လိုက်တယ် ဟီးးးနောက်တခါထပ်ဝယ်ပြီးပြန်လုပ်မယ်
haa ကိုရီယား ငရုတ်သီးနှစ်က ကိုရီယား ဟင်းချက်နည်း တော်တော်များများ အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်
ကင်ချီစတူး ချဉ်စပ် ဟင်းရည် ချက်နည်းလေး တင်ပေးပါအုံး ၀တ်ရည်ရေ …
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစား တင်ပေးပါ့မယ်
Is it same taste frome Her’s Korea Restaurent’s(Wet Salat)?
ဟုတ်ကဲ့။ Her’s မှာစားတဲ့ ၀က်သားကင်လုပ်နည်းနဲ့ တူတူပါပဲ…
နယ်ကဆိုရင် .. ကိုရီယားအနှစ်ဝယ်လို့ ရှာမရရင်၊ ငရုတ်သီးပွပုကို အစေ့ထုတ် ရေနွေးနဲ့ ပြုတ်ပြီ ကြိတ်စက်နဲ့ ကြိတ်ပါ။ ပြီရင် သကြားများများ၊ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီ သုံးရင်လည်းရတယ် sis.. 🙂
နယ်ကမို့လို့ပါ thanks မဝတ်ရည်
Welcome par 😉
ပါတ်ကci cရန်ကုန်ရောက်တော city mark မှာမေးကြည်တောကုန်သွာပြီးတဲ့ အချိန်မရှိတော့ဒီအတိုင်းပြန်လာရတယ် ငရုတ်သီးနှစ်အတွတ်ကျေးဇေူးဘဲနော့် 
ဟုတ်တယ်။ CityMart မှာ တခါတလေ ငရုတ်သီးနှစ် ပစ္စည်းပြတ်နေတတ်တယ်။ အဲဒီအခါ ၀တ်ရည်လည်း ကိုယ်နည်းကိုယ်ဟန်နဲ့ လုပ်ပြီ လုပ်စားဖြစ်တာပါ။ လုပ်စားကြည့်နော်…
မမ၀တ်ရည် သစ်တော်သီး ၀ယ်မရလို့ သူ့အစား ဘာ အစားထိုးထည့်ရင် အဆင်ပြေမလဲ ပန်းသစ်တော် ဆိုရင် ကော အဆင်ပြေနိုင်လား ဖြေပေးပါအုံးမမ
Welcome par naw!
Kyaw Ko Ko Zaw says:
I want to know where to get the smoked grill bar from the picture No.4I live in the downtown. I am expecting to celebrateaparty on New Year this time.
K K Pwint Pwint says:
အစ်မရေ… သမီးတို့ အခု လုပ်စားနေပါပြီ။ ရှလွတ် ရှလွတ်
her’s korea food shop မှာ ဝတ်သားဆလပ်ထုပ်က မကင်ထားဘူးလားလို့ စိုစိုအိအိနဲဆီများ တယ် မကင်ပဲ အဲလိုစိုစိုအိအိလေး ရအောင်ကော် ဘယ်လို့လုပ်ကလည်းအမ her’s မှာ ပဲငပိလည်း ပါတယ် အဲပဲငပိက ဘယ်လိုလုပ်ရလည်းအမ ?????????? Pls answer
Ngu Wah Aung says: